एभिन्युज टेलिभिजनदशैंका लागि आजबाट नयाँ नोट साट्न शुरु, कहाँ-कहाँबाट पाइन्छ ? - एभिन्युज टेलिभिजन
दशैंका लागि आजबाट नयाँ नोट साट्न शुरु, कहाँ-कहाँबाट पाइन्छ ?
21 Ashwin 2075 Sunday 8:59 am प्रतिकृया दिनुहोस
काठमाडौँ : नेपाल राष्ट्र बैंकले दशैंका लागि आजवाट नयाँ नोट साट्न शुरु गर्ने भएको छ । बैंकले ५, १०, २०, ५० र एक सय दरका नयाँ नोटको सटही खुल्ला गर्न लागेको हो । एकजना ब्यक्तिलाई २७ हजारका दरले नयाँ नोट सटही सुविधा उपलब्ध गराईएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।